🥇 ▷ Filimka iPhone-ka - kuwani waa talobixinteyda (Sebastian & # 039; talooyinka xiisaha leh) ✅
Filimka iPhone-ka – kuwani waa talobixinteyda (Sebastian & # 039; talooyinka xiisaha leh)
Goobta ugu tayada wanaagsan had iyo jeer ma keento tayada ugu fiican. Maxay yihiin dejimaha aan isticmaalo marka aan ku tooganayo iPhone-ka, waxaan halkan uga sheegayaa – oo ay la socdaan talooyin kale – fiidiyowga.
Dabcan, qaadashada sawirro aad uga fiican, iyo sidoo kale taasi waxay qusaysaa tayada sawirka marka la tooganayo. Hadana waxaan inta badan filim ku maqnaadaa fasaxa anigoo wata casriga. Maxaa yeelay xasilinta muuqaalka fiidiyowga ayaa aad uga fiican iPhone-ka marka loo eego Nikon. Intaa waxaa sii dheer, taleefanka casriga ah wuxuu abuuraa 60 guntin halkii seken, haddii loo baahdo howlaha tartiib tartiib ah xitaa 240 sawir. Taas oo xitaa aanan u isticmaalin duubista 4K, waxaan ku sharxaayaa fiidiyowga kore – xitaa isku day faraqa! HDR otomaatig ah ayaa la tacaalida xaaladaha qaarkood ee soo-gaadhista ka wanaagsan muraayadda muraayadda. Oo haddii aadan kaliya sameynin sawirada maskaxda ee quruxda badan, waxaad ku sameyn kartaa iPhone autofocus si fudud. Ugu dambeyntiina, ugu yaraan, taleefanka casriga ah si dhakhso leh ayaa looga saaray jeebkaaga oo diyaar ayaa loo yahay in la isticmaalo.
Hadana waxaa jira dabagal. Fasax ka hor, inta badan waan kaxaystay muusikada waxaanan u wareejiyay iMovie, ka dib waxaan xujay intii lagu jiray fasaxa fiidiyowga fasaxa ee mashruuca. Gurigayga waxaan ku wareejinayaa galka mashruuca oo dhan Mac oo waxaan ku sameeyaa taabashada dhameystirka ee iMovie ama Final Cut Pro X. Sida tani u shaqeyso, waxaan ku sharaxay mowduucyo taxane ah oo loogu duubo filimka iPhone:
Filimka iPhone-ka – dhejinta mawduuca:
Haddii aadan wax xiriir ah la lahayn barnaamijka Apple ee wax lagu qoro ee iMovie, halkan waa tababbar-tallaabo tallaabo tallaabo ah:
Sideed u isticmaashaa AppleProducts gaar ahaan wax ku ool ah? Shaqooyinkee ayaa ah inaad maskaxda ku haysaa? Galab walba oo Arbaco ah, tifaftiraha GIGA Sebastian wuxuu muujinayaa tiro kooban oo talooyin ah oo aad ugu jeceshahay mowduuc ama badeecad ku saabsan GIGA fiidiyowga.